Ikhanda elibuhlungu voltage kuyinto uhlobo abavamile ikhanda. Ngezinye izikhathi libhekisela kuye ubhekene inani elingaphezu kwengxenye yabantu emhlabeni. isimo okunjalo ngokuvamile ibhekwa njengosizo isifo eyinhloko. Isizathu abukeke kulokhu ukukhathala njalo, ukucindezeleka ezinzima, ukukhathala, ezingamahlalakhona ukungalali ngokwanele, ukucindezeleka. Ngu uqobo, Ikhanda kungaba eyinhloko, okwenzeka ngokumelene okwenza sezizathu ngenhla, secondary ohambisana yisiphi isifo, ikakhulukazi ubuchopho. Iphinde kungavuka umuntu engumqemane ngemuva kosuku kanzima besebenza, ngesikhathi ekucindezelayo kwengqondo okunamandla, ukukhungatheka, wokulwa nendlala, abahlala ezindaweni lokungcoliswa komoya, khona eside emgwaqeni kubanda ngaphandle isigqoko.
Amaphaphu-hlobo ikhanda has izici ezilandelayo: kuthathela ngokuvamile kancane ubuhlungu ukubelesela emathempelini yakhe (ngokuvamile kokubili ngesikhathi esisodwa), kancane kancane angase ukugqanyiswa noma, kunalokho, cishe fade. It is hhayi ephelezelwa throbbing emathempelini, hhayi iyakhula ngesikhathi umsebenzi, ingabe usekhona e ubuthongo noma ngokushesha ngemva ukuphumula, hhayi ephelezelwa ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza. Nokho, ingemuva yayo kungenzeka ukungabekezelelani ukuba imisindo elikhulu noma izibani.
Amaphaphu-hlobo ikhanda ingahlala kusuka amahora ambalwa izinsuku eziyisikhombisa noma ngaphezulu. Abanye abantu bayashesha kancane ikhanda sonke isikhathi, wayibamba ukubonakaliswa ukukhathala, nokungalali, ukucindezeleka. Nokho, isimo esinjalo akuyona evamile mayelana nomzimba womuntu kudinga ukuxilongwa kanye nokwelashwa.
Kuye isikhathi namandla ukubonakaliswa like bekhanda kungaba imnene, ngokulinganisela futhi ezinzima. Mayelana ikhanda ukucindezeleka omnene bathi uma lokhu uphawu ekukhathaza umuntu akukho kuka kabili ngesonto, iphele ngemuva kokuthatha izidakamizwa noma ukuzilibazisa. Ukuqeda lesi sifo kungenzeka ngaphandle kokuthatha imithi ekhethekile. Ukuze wenze lokhu, kuzomele ulandele imithetho ethile yokuziphatha ekuphileni kwansuku zonke: ukulala okungenani amahora angu-8, ukudla ngendlela efanele, baphuze ngosuku kangakanani uketshezi ukuqeda kusukela ekudleni ukudla okubabayo, uphuzo caffeine kanye notshwala, ukuhamba xaxa, isikhathi esincane computer futhi phambi TV .
Amaphaphu ikhanda ungamele ziphathwe izidakamizwa nonsteroidal antiinflammatory. Ngokwesibonelo, kusho "aspirin", "diclofenac", "i-ibuprofen". Ezinye iziguli enkulu usizo izidakamizwa "paracetamol". Ukusebenzisa izidakamizwa ezifana akudingekile, kusukela ngamunye wabo emibi, futhi uma kwenzeka yokudlula Isikali ecacisiwe kungaholela nemiphumela engathandeki ngoba umzimba. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwabo njalo kuholela ekubeni umlutha wezithombe, ekugcineni umzimba nje uyawavi- ukuphendula ngokwanele.
Susa usizo ikhanda ezinye imithi yendabuko ngempumelelo. Ikakhulukazi, ukusetshenziswa decoction yamakhambi ezifana oregano, peppermint, lemon namafutha, infusions of elder flower, amacembe, valerian, impande elecampane.
ikhanda njalo futhi ezinzima zidinga ukwelashwa olunzulu ulwe ukucindezeleka nokuqeda izimbangela. Njengoba ejenti eziyisisekelo kuleli cala kuthiwa sedatives ( "Xanax") kanye namandla anti-depressants ( "Amitriptyline"), analgesics futhi ukuvuvukala kunikezelwe. Inkambo yokwelashwa lide kakhulu, ihlala izinyanga 2 noma ngaphezulu.
Uma kusadingeka lokhu uphawu ngemuva kwesikhathi esithile ngemva ukwelashwa kufanele futhi ubheke isazi sezinzwa, ngoba ngaphambi kokukhipha ikhanda, kubalulekile ukuba kutholakale imbangela ivelaphi, kanye ilungelo lokwenza lokhu kungaba onguchwepheshe.